महानगरका एमाले उम्मेदवारलाई हराउन पार्टीभित्रैबाट यतिसम्म भएको खुलासा गोप्य कुराकानी नै भयो लिक ! • raradiodarpan.com
महानगरका एमाले उम्मेदवारलाई हराउन पार्टीभित्रैबाट यतिसम्म भएको खुलासा गोप्य कुराकानी नै भयो लिक !
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले देशका सबै अर्थात ५ वटै महानगरपालिकामा पछाडी परेको छ । यसका विभिन्न कारणहरु ओल्याउन थालिएको छ । कुनै महानगरमा उपयुक्त उम्मेदवारको
पार्टीले छनोट गर्न नसक्नु, सत्ता गठबन्धन हुनु, पार्टीभित्रैबाट अन्तरघाती काम हुनु लगायत यसका मुख्य कारण बनेका छन् ।
यसैबीच, पोखराका एमाले नेताहरुले पार्टी उम्मेदवार कृष्ण थापालाई हराउन चुनावअगाडि बनाएको गोप्य रणनीति बाहिरिएको छ । सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यसँग
रकम बार्गेनिङ गरेर थापालाई हराउन असन्तुष्ट खेमाका दुई नेताले गरेको कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भएपछि यस्तो रणनीति बाहिर आएको हो ।
१३ मीनेट ५४ सेकेण्डको उक्त अडियो संवादमा हालसम्मका निस्कलंक हेभीवेट आचार्यलाई भोट हालेर थापालाई हराउन योजनावद्ध तयारीका कुरा गरिएका छन् । धनराजसँग पैसा मागेर कलममा भोट खन्याउने र थापालाई देखाइदिने उनीहरुको
योजना उक्त संवादमा प्रष्ट बुझिन्छ । दुईपक्षीय संवादमा फोनकर्ताको पहिचान खुलेको छैन भने अर्कोतिर एमालेबाट पोखरा महानगरको टिकटको आकांक्षी रहेका प्रदेश सांसद तथा युवा संघका
पूर्वअध्यक्ष राजीव पहारीका पिए मनोज छन् । मनोजले फोन गर्ने व्यक्तिलाई कृष्ण थापा हराउन आफू जेसुकै गर्न तयार रहेको विश्वास दिलाएका छन् ।
“ऊ ६४ वर्षको भैसक्यो । कृष्ण थापा सिध्दिएपछि बाटो खुल्ने राजीव दाइकै हो । त्यो खगे चोर (खगराज अधिकारी) र थापा काजी (कृष्ण थापा) दुवैलाई थाहा छ मनोजले असहयोग गर्ने होला भनेर । त्यसैले त्यसलाई अप्ठेरो पर्दैन दाइ । खगराजले त्यो मनोजले असहयोग गर्छ भनेको रहेछ । “
संवादमा अर्को पक्षले धनराजसँग पैसा लिएर भोट हाल्दिने गरी कुरा अघि बढाउन मनोजलाई पटक पटक आग्रह गरेका छन् । गठबन्धनका उम्मेदवार धनराज काका पर्ने भएकाले आफूले सिधै पैसा माग्न नसक्ने बाध्यता सुनाउँदै उनले त्यसको जिम्मा
लिइदिन मनोजलाई आग्रह गरेको संवादमा सुन्न सकिन्छ । कुराकानीका क्रममा उनीहरुले एमालेको पकड भएका वडामा अन्तर्घात गरेर थापालाई हराइदिने र राजीव पहारीलाई पोखराको राजनीतिमा हावी गराउने योजना बनाएका छन् ।
पोखराको प्रारम्भिक मतपरिणामले उनीहरुले सोचेको पुरा हुने संकेत पनि देखिएको छ । करिव १२ हजार ५९० मत गणना हुँदा धनराजले ५७ सय ४० र कृष्ण थापाले ५ हजार भोट पाएका छन् । उपमेयरमा भने एमालेकै मन्जुदेवी गुरुङ अगाडि छिन् ।
एमालेको गढ मानिएका ठाउँमै थापा पछि परेपछि एमालेहरुले अन्तर्घात भएको आशंका गर्न थालेका छन् । हाल पोखराको वडा नम्बर १,२,२३,२४ र २५ मा गणना भएको छ । जसमध्ये यसअघि एमालेले जितेका दुई वडा (१ र २ ) कांग्रेसले लिएको छ ।
देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका पोखराको टिकट वितरणलाई लिएर एमालेमा चर्को लफडा भएको थियो । एमालेले दीपक पौडेललाई दिएको टिकट खोसेर थापालाई दिएपछि आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएको हो ।
एमाले उपमहासचिव पृथ्बीसुब्बा गुरुङ पक्षका पौडेललाई दिइएको टिकट खोसेर संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी निकट थापालाई दिएपछि त्यहाँ असन्तुष्टी बढेको हो ।
यस्तो छ कुराकानी ः- फोनकर्ता – मेयरको चुनावको के छ मेलोमेसो ? मनोज– वडा जित्नुपर्यो,मेयर त्यस्तै हो । फोनकर्ता – धनराज मेरा अङ्कल हुन्, पोलिटिकल्ली उनी बाहिरका हुन् ।
अहिले कांग्रेससंग मिले, हामीले बोल्न मिलेन । हाम्रो एउटा ग्रुप छ, डीजी सयपत्री युवा क्लव जुन मैले सम्हालेको छु । हामी साइलेन्ट बसेर धनराजलाई सहयोग गर्छौं भन्नुपर्यो । मैले त अंकललाई सहयोग गर्छु,पैसा लेऊ भन्न मिलेन । त्यसको लागि कसरी गर्न सकिन्छ ?